Ungayikhusela njani i-excavator xa usebenzisa i-breaker ukunqanda ukonakala kwe-excavator?
Ixesha Post: 05-11-2020
1. Umthamo weoyile yeHydraulic kunye nongcoliseko Ukusukela ukuba ungcoliseko lweoyile ye-hydraulic sesinye sezizathu eziphambili zokungaphumeleli kwempompo ye-hydraulic, kufuneka kuqinisekiswe imeko yongcoliseko lweoyile ye-hydraulic ngexesha. (Guqula ioyile ye-hydraulic kwiiyure ezingama-600 kunye nezinto zokucoca ulwelo kwiiyure ezili-100). Ukungabikho kweoyile hydraulic kuya c ...Funda ngokugqithisileyo »
Indlela yokusombulula ingxaki yeoyile emnyama kwii-hydraulic breakers
Ixesha Post: 03-12-2019
Hydraulic breaker iye yaba yinto ebalulekileyo yokusebenza isixhobo ukumbiwa ngesanti kubunzulu baphantsi. Abanye abantu bakwafaka ii-hydraulic breaker kwi-backhoe loaders (ekwabizwa ngokuba zixakekile kumacala omabini) okanye kulayishwa amavili okutyumza ukusebenza. Xa usebenzisa i-hydraulic breaker kwi-excavator, uya kufumanisa ukuba i-hydraulic ...Funda ngokugqithisileyo »
Yintoni ekufuneka uyiphephe xa usebenzisa ihammer hydraulic:
Ixesha Post: 07-25-2018
Ekusetyenzisweni kwesando se-hydraulic zininzi izinto ezinokuchaphazela ukusebenza kwayo kakuhle, kwaye zibangele nokonakala, kwimeko apho kufuneka siphephe ukusebenza, ukuze sikhusele bhetele isando se-hydraulic? 1. Kunqande ukusebenza kwimeko yentshukumo eqhubekayo Jonga ukuba uxinzelelo oluphezulu ...Funda ngokugqithisileyo »
Amanqaku okugcina ihamile yokutyumza ngesanti kubunzulu baphantsi:
Ixesha Post: 01-14-2018
Isando esisetyenziswa kakhulu kubomi bethu kwaye sisixhobo esibalulekileyo sokumba amanzi xa sicinga ngesando esisetyenziswa ngamanzi, sicinga ngezixhobo azisebenzisayo emsebenzini wakhe wokumba, esihlala sizibona xa kusakhiwa indlela. ikakhulu ezisetyenziswa c ...Funda ngokugqithisileyo »
Oonobangela bokuchotshozwa kwesando ngesandi ngesiphoso sehammer:
Ixesha Post: 03-23-2017
Njengesixhobo esibaluleke kakhulu kubembi, isando esityumkileyo sinokuwasusa ngokufanelekileyo amatye adadayo kunye nomhlaba kumatanda amatye. Abanye abasebenzisi baxele ukuba istrike frequency singalunganga ekusebenziseni. Siyintoni isizathu soku? Esona sizathu siphambili sale meko kukuba intonga yokomba ...Funda ngokugqithisileyo »
Uchebe Kuba Excavator, Isityumzi Excavator, Hb Uthotho Breaker, Control Valve Breaker, Cwaka Uhlobo Breaker, Pulverizer Kuba Excavator,